အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ၏ ပထမဦးဆုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည် - Myanmar Pressphoto Agency
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ၏ ပထမဦးဆုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည်
MPA Myanmar NUCC Politics PressConference
Politics November 13, 2021 ·0Comment
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ – NUCC မှ အနာဂတ် ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေသည့် အရေးကြီးလုပ်ငန်းစဥ်များကို ပြည်သူများသိရှိစေရန်အတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို နို၀င်ဘာ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း NUCC မှ သိရသည်။
တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ စုဖွဲ့မှု အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုကိုဖော်ဆောင်နေသည့် ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီလုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းများ၊ တော်လှန်ရေးအတွက် အရေးကြီးသည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဥ်များကို ပြည်သူများထံသို့ သတင်းမီဒီယာများမှ တစ်ဆင့်ရှင်းလင်းတင်ပြမည် ဖြစ်သည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုတေဇာဆန်း ၊ ဒေါက်တာလျန်မှုန်းဆာခေါင်းနှင့် အတူတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ သပိတ်ကော်မတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ က ဦးဆောင်ရှင်းလင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ – NUCC မှ အနာဂတ် ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းခြင်းကို မူလက အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း အချိန်မီ မပြီးစီးခဲ့သဖြင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
တော်လှန်ရေး နှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးတွင် နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုပေးရမည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC) အ ကြောင်း ပြည်သူလူထုအား အမြန်ဆုံး အသိပေးရန် အရပ်ဘက်လူထုအင်အားစုများ တောင်းဆိုချက်ကို MM Spring – Civil Society Collective စသည့် အဖွဲ့အစည်း အချို့က တောင်းဆိုထားသည်။
#NUCC #သတင်းစာရှင်းလင်း #MPA
National Unity Consultative Council will Hold First Press Conference
The National Unity Consultative Council (NUCC) will holdapress conference on November 16 to inform the public of the important processes being taken for buildingafuture federal democratic union, according to the NUCC.
The activities and important processes forward for the revolution being taken by the National Unity Consultative Council for buildingafederal democratic union which displays collective leadership by leaders of Ethnic Armed Organizations and leaders from respective forces will be presented to the public through news media.
The press conference will be led by the 88th generation student leader Ko Min Ko Naing, Ko Tay Zar San, Doctor Lian Hmung Sakhong along with ethnic leaders and strike committee representatives.
The National Unity Consultative Council (NUCC) originally planned to convene the press conference on October5about the political activities for buildingafuture federal democratic union, but had to be cancelled as it could not be finished in time.
Some organizations like the MM Spring – Civil Society Collective have requested to inform the public as soon as possible about the NUCC which would take the political leadership in the revolution and buildingafederal democratic union.
#NUCC #PressConference #MPA
human right violations (61)
နိုင်ငံရေးပုဒ်မတပ်အဖမ်းခံရသည့်အမျိုးသမီး ၃၀ ဦးကို နယ်ထောင်များသို့ပြောင်းရွှေ့သလို ထောင်တွင်း နှိပ်စက်မှုများရှိနေ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအနိုင်ကျင့်ခံနေရမှုအပေါ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသည့် ဘားအံထောင်အုပ်ချုပ်သူများကို နိုင်ကျဉ်းများဆန္ဒပြ
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ထောင်ပြောင်းမှုများပြုလုပ်လာ
NCAထိုးထားသောအဖွဲ့များအား နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှဆန်ထောက်ပံ့မှု KNUနှင့်CNF မပါ
ဘုရင့်နောင်စစ်ကြောရေးတပ် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရကာ ဂိတ်စောင့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂ဦးထက်မနည်းသေဆုံး
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု စွပ်စွဲချက် ကန့်ကွက်လွှာကို NUG အစိုးရပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပြီး လက်ခံကြောင်းစာပြန်ပို့
အတိုင်ပင်ခံ၏ သက်တော်စောင့် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရဲအုပ်ပြည့်ဖြိုးနိုင် ထောင် ၃ နှစ်ကျ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်တွင်ဆိုင်ပိတ်မည်ဟု ကြေညာသူများကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ဖမ်းဆီးကာ နေအိမ်နှင့်ဆိုင်များကိုချိတ်ပိတ်
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီခြိမ်းခြောက်သော်လည်း အသံသပိတ်ပြုလုပ်ရန် သပိ‌တ်ခေါင်းဆောင်များတိုက်တွန်း
ကလေးမြို့က လွှတ်တော်အမတ်များ၏နေအိမ်များနှင့်တမူးမြို့က စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်သည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏ နေအိမ်များကို ချိတ်ပိတ်ခံရ
© 2022 Myanmar Pressphoto Agency - WordPress Theme by WPEnjoy